2012 Social Media Marketing Mmepụta
GO-Globe.com mepụtara infographic, ndị Medialọ ọrụ na-ere ahịa na mgbasa ozi, na-ahọpụta data dị mkpa na Social Media Examiner Akụkọ 2012 Social Media Marketing Industry. The Infographic na-ekpuchi ihe kachasị ọhụrụ na Social Media, Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi, Atụmatụ nke ndị na-ere ahịa mgbasa ozi na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'uche m, nsogbu ndị kachasị dị elu bụ ntụpọ. Ọ bụ ezie na teknụzụ anyị na-aga n'ihu na-akawanye mma, ụlọ ọrụ ka na-agbasi mbọ ike iji mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, chọta ndị na-eme ihe ike, tụọ nlọghachi na ntinye ego, wuo ndị mmadụ, ma zụlite usoro ndị anaghị achọ ọtụtụ akụrụngwa. Nke bụ eziokwu bụ na uru nke mgbasa ozi mmekọrịta dị ịtụnanya, mana mbọ achọrọ iji nweta nsonaazụ ndị ahụ na-aga n'ihu na ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-ere onwe ya ma setịpụ atụmanya dị oke elu.
Tags: infographicnsogbu mgbasa ozi mmekọrịtaSocial Media Examinerụlọ ọrụ mgbasa oziụlọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozimgbasa ozi ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ
Ọkt 15, 2012 na 2:56 PM
Ozi oma. Chọta ndị na-ege gị ntị dị ezigbo mkpa, mgbasa ozi mmekọrịta abụghị ajụjụ gbasara ọnụọgụ ọnụọgụ. Ihe dị mkpa karịa bụ ịnweta ezigbo mmekọrịta gị na ndị na-ege gị ntị.
Nov 30, 2012 na 5:48 AM
Na-elekwasị anya na ozi gị mgbe niile na mkpa nke ezigbo onye ahịa gị
ma ọ bụ onye ahịa ma ghara ịtụ egwu ịhapụ ndị nwere ebumnuche efu
iji ọrụ gị. Ha nwere ike ime ka onu ogugu ha di nma, mana ha di nma
abaghị uru na azụmahịa gị. N'ezie, ọ bụrụ n'ịkwụ ụgwọ maka bandwidth blog gị
site na gigabyte ma ọ bụ ị kwụọ ụgwọ onye na-agụ akwụkwọ maka email gị
ọrụ, ndị na-achụ nta n'efu na-emebi ma ego gị ma oge gị.
Emebe weebụsaịtị Singapore
Daalụ maka ozi gị bara uru nke ọma kọwara nke ọma.